२०७८ मंसिर २१ गते मंगलबार
मोदी सरकारलाई बौद्ध जोरपाटी घुमाउँदा पो होला की !
काठमाडौं । चावहिल जोरपाटी सडकमा यात्रा गर्नेहरुले दुःख पाएको महिनौं भइसक्यो । पानी पर्‍यो भने हिलाम्ये हुन्छ, घाम लाग्यो भने बाङबुङ्ती धुलो उड्छ ।
बुद्ध दर्शन र गौतमबुद्ध
शाक्य मुनि गौतम बुद्धलाई ‘भगवान्’ भन्ने पनि छन्, ‘महान् दार्श्निक’ मान्ने पनि छन् । बुद्धको सहस्राब्दीमा प्लेटो, अरिस्टोटल, महावीर जैन, लाउन्स आदि दार्श्निक र वैज्ञानिक जन्मिए तर उनको जस्तो ख्याति कमाउन सकेनन् । त्यसैले २ हजार ६ सय वर्षअघि लुम्बिनीमा जन्मेका यी महापुरुषलाई नेपालले राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान दिएको छ ।
बुद्ध एउटा धर्म मात्रै हैन दर्शनपनि हो
बौद्ध एउटा धर्ममात्रै नभएर दर्शन पनि हो। जीवन-जगत्, आत्मा, पुनर्जन्म, पाप-पुण्य, सत्य, ईश्वरजस्ता विषयमा गहन दार्शनिक विमर्शका अतिरिक्त मनोहर बौद्ध साहित्य पनि यसभित्र छ। यो एउटा कालखण्डको ऐतिहासिक दस्ताबेज पनि हो। यो अलिकति राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, ध्यान, योगजस्ता धेरै विषयको समष्टि रूप हो।
पासाङ ल्हामु ‘महिला जागरणको प्रतिरुप’
मानिसहरु जन्मन्छन् र मर्छन् यो यथार्थ कुरा हो र ध्रुवसत्य पनि । कोही मानिसहरु सयौं बर्ष बाँच्छन्, तर उनीहरुको समाज विकार र परिवर्तमा कुनै योगदान हुन्न्, देखिन्छन् केवल मासुको डल्ला मात्र । कोही कोही पूर्ण अयाू जीवित रहन सक्दैनन््, चाँडै मर्दछन् । तर, उनीहरुले बाँचुन्जेल गरेको साहसिक कर्म वा सत्कर्मको कारण समाज र राष्ट्रमा बाँचिरहेकै हुन्छन् । त्यसैको एक उादहारण हो पासाङ ल्हामु शेर्पा ।
धेरैका लागि उदाहरण बनिन् ‘पासाङ ल्हामु’
पासाङ ल्हामु मेरी एक मात्र छोरी हुन् । मेरा पाँच सन्तान छन् । दुई छोरा जन्मिएपछि पासाङ जन्मिन् । त्यसपछि अरु दुई छोराहरु जन्मिए । पासाङ सानैदेखि अलिक कठोर र कडा स्वभावकी थिइन् । कुनै कुरा वा विषयमा सोचेपछि उनी गरी छाड्थिइन् । नारी, आइमाईले गर्न सक्छन् नि जे पनि–उनी भनिरहन्थिन् ।
बुद्ध, बौद्धभूमि र नेपाली सत्ता
शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका थिए, जुद्ध शमशेरले । तिब्बतबाट उपत्यका पुगेका लामा गुरुको धर्मदेशनाबाट प्रभावित भई केही युवा बौद्ध भिक्षुका रूपमा प्रवजित भए, त्यतिखेर । चिवर धारण गरे, उनीहरूको श्रावक जीवन थालनी भयो । वर्षाबासका रूपमा स्वयम्भु, आनन्दकुटीको ध्यान शिविरमा रहंँदै थिए ।
मन्त्री आन्टी, मलाई पनि उपचारको लागि एक करोड दिनुहोस् न !
उनका बुबालाई तत्काल स्कुलमा बोलाइयो । उनी पनि ज्यादै कमजोर थिए । शंका लागेर मुटुको भिडियो एक्स-रे गरियो । मुटु त छोरीको भन्दा खराब ! चिकित्सक टोलीको मन झन् खिन्न भयो ।
धरानमा शेर्पा लेखौं, शेर्पा लेखाऔं कार्यक्रम सम्पन्न
३६ दिन अघि
५९ दिन अघि
६० दिन अघि
मानेभन्ज्याङका १९ पसलबाट म्याद गुज्रेको सामान बरामद
६२ दिन अघि
टाक्सिन्दु शेर्पा किदुगको जनगणना जागरण कार्यक्रम
६४ दिन अघि
६५ दिन अघि
ओखलढुंगा कला–साहित्य समाजको अध्यक्षमा राज राई